Duqa Degmooyinka Magaalada Mersin Vahap Seçer wuxuu la yimid ardayda jaamacadaha barnaamijka ee loogu magac daray "Duqa magaalada Seçer wuxuu u sheegayaa Nidaamka Tareenka ee Mersin" casuumaad ay ka heleen Kooxda Ardayda Injineerka Rayidka. Su'aalaha ardayda ee ku saabsan Nidaamka Raadinta Mersin [More ...]
Duqa Magaalada Konya ee Uğur İbrahim Altay ayaa la kulmay xubnaha saxaafadda ee Konya waxayna sameeyeen ajandaha qiimaynta. Isagoo ka hadlayey barnaamijka Xarunta Shirarka ee Seljuk, Duqa magaalada Altay wuxuu ka sheegay barnaamijyadii iyo maalgashiyadii ugu dambeeyay. [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa sheegay in 1915 Bridge Bridgeanakkale Bridge uu qaadan doono booska koowaad ee aduunka marka laga hadlayo howlaha injineerinka. Mashaariicda ugu muhiimsan ee Turkey ayaa ka 1915 si ay u baaraan goobta si ay u Bridge Dardanelles [More ...]
Xiisaha Weyn ee Istaraatiijiyada Istambul, Istaag ilaa Joojinta Tartan Aqooneed; Wuxuu dhalinyarada ka qabtay Yenikapı-Hacıosman metro magaalada Istanbul. Ilaa joogsiga xiga, ayuu ninki yaraa weydiiyay inuu ka jawaabo su'aalaha uu weydiiyay, rakaabkuna sidoo kale kama aysan aamusin. [More ...]
Shirkadda tareenka ee Taliyaaniga Salini ayaa ku dhawaaqday inay ku guuleysatay mashruuca tareenka xawaare sare leh ee qandaraaska laga siinayo Mareykanka. Qandaraaskan oo gaaraya $ 5,9 bilyan wuxuu ka kooban xirmo ay ku jiraan naqshadeynta, dhismaha iyo dayactirka khadka tareenka xawaaraha dheereeya ee u dhexeeya Houston iyo Dallas. [More ...]
Madaxweynaha Gobolka CHP Bursa İsmet Karaca wuxuu qabtay isu soo bax mudaaharaad oo looga jawaabayo khadka tareenka T2, kaasoo ah dhismaha dhismaha oo aan dhameystirneyn. Xisbiga Dadka Jamhuuriga Bursa Guddoomiyaha Gobolka vinsmet Karaca, maalgashiga aan waligiis dhammaanayn [More ...]
Howlgalka Bursa Busta Howlgalka (BUDO) waxaa dhistay Dowlada Hoose ee Bursa si ay u siiso gaadiid badeed inta udhaxeysa Bursa iyo Istanbul. Adeegyada Basaska Badda waxay bilaabmeen Janaayo 23, 2013. DO rakaab ka ah duullimaadyada Istanbul-Bursa [More ...]
Shirkadda soo saarta 7 tram adduunka ee Bursa Durmazlar Holding 'Panorama' waa taraamka wadaniga Turkey ee ugu horeysay, soo diray in xubnaha ka ah EU Olsztyn, Poland. Tareenka oo ka tagaya Bursa Khamiista, Janaayo 30, Khamiista, Febraayo 13 [More ...]
Kayacık - ka Konya Railway Station, taas oo ah 26 km mashruuca rail dheer cusub, "Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State for saxiixyada KONYARAY ee Konya degmada Metropolitan waxaa la tuuraa. Guddoomiyaha Konya xafladda saxiixa [More ...]
Tareen siday rakaabka Australia ayaa ku burburtay wadooyinka. Waxaa la sheegay in 160 qof ay dhinteen tareenka tareenka oo siday 2 qof oo rakaab ah oo la banneeyay oo la dul dhigay. Sydney - Melbourne Express, waxay ku shaqeysaa saacadda 19.50 gudaha Australia [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaaladda Istanbul (İBB) Madaxweynaha Ekrem İmamo saidlu ayaa yiri, “Muwaadiniintu waxay rabaan in Marmaray lagu daro adeegga gaadiid 24ka saacadood ah ee aan ka bilownay Istanbul ee la xiriira maqnaanshaha Marmaray ee mashruuca '24 saac ee gaadiidka' ee laga hirgaliyay Istanbul. [More ...]
METRO İSTANBUL, oo ​​ah shirkad hoos timaadda 'İBB', ayaa biloowday tababar 109 musharrax haween ah oo tartamayaal ah. Maareeyaha guud Özgür Soy, oo la kulmay musharixiinta ayaa sheegay inay hadafkoodu yahay sidii loo kordhin lahaa shaqooyinka haweenka wuxuuna yiri, “nolosha dadka ayaa adiga lagugu aaminay. Taasi waa sababta [More ...]
Ruushka gudaheeda, tareenka xawaaraha sare ku socdaa wuxuu ku dhacay qof aan garowsanayn inuu tareenkaasi soo gaadhay heer goyn. Dhacdooyinkaas naxdinta leh ayaa loo arkay wax aan fiicnayn… Russia's St. Isgoyska heerka u dhow saldhigga tareenka ee Slavyanka ee St. Petersburg [More ...]
İBB Madaxweynaha Ekrem İmamoğlu ayaa yidhi,Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro ”waxay sameysay wadadii tijaabada ugu horeysay ee" Mecidiyeköy-Mahmutbey Line ", wejiga koowaad. İmamoğlu, oo baaray xarunta kantaroolka ee Tekstilkent, oo ah barta ugu dambaysa ee wadista imtixaanka, ayaa hadal ka jeediyey isla goobtaas. [More ...]
Dhul gariir awgiis, tareenka waday kiimikooyin badan oo kiimikooyin dhagax ah ayaa la carqaladeeyay, tareenkii laga leexiyay ayaa lagu qulqulay webiga, oo ku soo noqday goobta dagaalka. Cinwaanka sawirradu waa tareen xamuul ah gudaha Maraykanka sababtoo ah dhagxaanta buurta ka soo dhacaya [More ...]